Shemshuk व्लादिमीर Alekseevich: लेखकले र वैज्ञानिक को एक जीवनी
व्लादिमीर Alekseevich Shemshuk - लेखक र विद्वान जसको पुस्तकहरू तिनीहरूका सामग्री संग पाठक चकित। व्लादिमीर को आफ्नो धेरै काम उहाँले कुनै को दुनिया दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न सक्ने कुरा पाठक गरेको ध्यान चित्रकला, संसारको इतिहास बारे लेख्छन्। तर, यसको लोकप्रियता भए तापनि, बैज्ञानिक को जीवनी सानो ज्ञात छ - सही पाउन असम्भव व्लादिमीर Alekseevich Shemshuk को जन्म मिति। जीवन एक तथ्य पनि आफ्नो व्यक्तिगत वेबसाइट मा छैन।
व्लादिमीर Alekseevich Shemshuk को जीवनी
आधुनिक चीन को क्षेत्र मा 1950 मा यो ठूलो वैज्ञानिक जन्म। यो यति व्लादिमीर Alekseevich Shemshuk, जसको जीवनी सुरुमा पहिले देखि नै छ चकित हुन सक्छ, पिता चीन मा सेवा पठाइएको भयो। आफ्नो मातृभूमि फर्केपछि मा Shemshuk परिवारलाई पर्म क्षेत्रमा बस्थे।
मिति, मास्को, मा वैज्ञानिक जीवन जहाँ उहाँले आफ्नो अवलोकन र अनुसन्धान गतिविधिहरु आयोजित।
व्लादिमीर Alekseevich Shemchuk को जीवनी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व को एक वैज्ञानिक को गठन थियो। यो पर्म थियो र व्लादिमीर, स्नातक त्यसपछि जीवन पथ र क्यारियर को आफ्नो विकल्प मा एक महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका जो जीवविज्ञान र पछि कथाहरू को संकाय, स्नातक।
मा विज्ञान सुरु
व्लादिमीर Alekseevich Shemshuk को जीवनी मा चिनो लगाइएको छ, जो पहिलो चरण, अनुसन्धान काम, सम्पूर्ण आफ्नो जिम्मेवारी गर्न भन्दा दिइएको थियो जो थाले। यो व्लादिमीर Alexeyevich खुलासा गर्न आवश्यक थियो कि मुद्दा मा काम, उहाँले इतिहासको गहन अध्ययन मा लगी भएको छ नगर्ने व्यक्ति थाहा गर्दैन नयाँ र रोचक ऐतिहासिक तथ्य धेरै खोज।
व्लादिमीर बस छैन इतिहास, तर धरती मा सामान्य मानिसलाई र जीवनको उपस्थिति को एउटा प्रश्न जाँच्ने। आफ्नो काम मा पक्रने, व्लादिमीर ग्रह मा सबै जीवन को विकास मा धेरै रोचक तथ्य पत्ता। लेखकले लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आविष्कारको मान्छे जस्तै, एक मन भएका, अन्य जगतले उपस्थिति थियो। व्लादिमीर आज संसारमा विदेशी जात को उपस्थिति को संकेत नोटिस आफूलाई थाले। यो अनुसन्धान पछि, व्लादिमीर एक पटक निर्णय र हरेक दिन हाम्रो ग्रहमा उत्पन्न anomalous घटना को अध्ययन गर्न आफ्नो सबै जीवन लागि हो।
लेखक अन्य विज्ञान देखि जान्छ कि तर्कको मद्दत संग पुस्तकहरू आफ्नो विश्वास समर्थन गर्दछ। यस्तो विज्ञान गर्न व्लादिमीर Alekseevich भौतिक, रसायन, तर ज्यादातर कहानी थाले, यो मानव मूल को खर्च मा पक्कै मा लेखक को यसको अध्ययन छ। ऐतिहासिक अध्ययन गरेर, व्लादिमीर उहाँलाई आश्चर्य गरे भनेर धेरै inconsistencies याद: र यो सबै साँच्चै थियो? गहिरो खनाइ, लेखकले पनि पुरातन समयका आज पनि विज्ञान व्याख्या गर्न सक्षम हुने छैन कुन अनौठो कुरा, धेरै छ याद गर्न थाले।
सबै व्लादिमीर Shemshuk देखाए, तिनले यस्तो लेखे। धेरै वर्ष को लागि, म टिप्पणीहरू लिए, र लेखन एक वैज्ञानिक को जीवन मा मुख्य कुरा थियो। उहाँले आफ्नो व्यावसायिक रेकर्ड, प्रमाण फेला र Shemshuk पुस्तकहरू छापिएका थिए थाले। चाँडै आफ्नो काम र अन्य इच्छुक छन्। त्यो क्षण देखि, व्लादिमीर Alekseevich Shemshuk ख्याति आउँछ। दुवै वैज्ञानिकहरू र साधारण मान्छे - तर सकारात्मक पक्षहरू र आलोचना साथ व्लादिमीर यसलाई ध्यान छैन भन्ने तथ्यलाई बावजुद, अहिलेसम्म धेरै repels जो, बैज्ञानिक, को गतिविधिहरु गर्न आउँछ।
मिति, व्लादिमीर Alekseevich Shemshuk जसको जीवनी साँच्चै अचम्मको छ, मात्र विद्वान् पुस्तकहरू कि ब्रह्माण्डको मा अवस्थित अन्य समाजमा बारेमा लेख्छन्, तर पनि रूस को शहर मा सेमिनार आयोजित। तिनीहरूलाई, उहाँले सक्रिय बोल्छ र यो रुचि ब्रह्माण्ड, अन्य universes संसारमा धन्यवाद को मूल को सिद्धान्त मा हुन प्रयोग जस्तै हो जो दर्शक, सबै प्रश्नहरूको जवाफ, अझै पनि बेला, धेरै नजिकबाट अन्य आयाम र दुनिया सम्बन्धित थियो मानिस धारण त्यसैले उचित छैन। तथापि, पुस्तकहरू Shemshuk पनि लेख्छन् मान्छे भन्दा बढी व्यावहारिक भए मा, त्यो अन्य दुनिया संग एक जडान लाग्यो।
व्लादिमीर वैज्ञानिक विकास मा रोक्न छैन जाँदै छ। र आज, उहाँले जहाँ अवलोकन anomalies, पुरानो विश्वास संग, कुरा पुरानो कागजातहरू अध्ययन ब्याज विभिन्न स्थानहरू दौरा। संयुक्त सबै यो तपाईं व्लादिमीर गर्न जवाफ पर्छ भनेर प्रश्न धेरै दिन्छ।
Shemshuk व्लादिमीर Alekseevich: यसको गतिविधिहरु प्रतिक्रिया
लेखकले काम बारेमा सबै समीक्षा दुई मुख्य समूह विभाजन गरिएको छ: "। अर्थहीन पीडित" यसको गतिविधिहरु र वैज्ञानिक आविष्कारहरू श्रद्धा भएकाहरूलाई, र जो व्लादिमीर भनेर विश्वास ती निश्चित के यो साँचो रूपमा मानिन्छ, भन्न सक्दैन किनभने कति मान्छे - धेरै राय। कारण पनि anomalous गतिविधिको व्यावसायिक अध्ययन को आधुनिक संसारमा संदिग्ध वैज्ञानिक दिशा छ भन्ने तथ्यलाई गर्न सायद यो विभाजन समीक्षा।
व्लादिमीर Alekseevich Shemshuk "पुर्खा उपासना" को पुस्तक मानव जरा को एक अध्ययन हो। साथै, लेखक अर्को संसारको अस्तित्व, जो मा मृत्यु पछि मान्छे को हरेक पाठक उपलब्ध बताउँछन्। आफ्नो व्याख्या उहाँले नैदानिक मृत्यु बाँचे गर्ने मान्छे को कथा, तर पनि मात्र होइन नियम र यस्तो भौतिक रूपमा विज्ञान को सिद्धान्त समर्थन गर्दछ। अर्को संसार साँच्चै अवस्थित भनेर प्रमाणित गर्न, लेखक धेरै शताब्दीयौंदेखि धरती मा अवलोकन गरिएका "पछि" जीवन को सबै प्रकारका बारेमा लेख्छन्।
व्लादिमीर अर्को आयाम एउटा संक्रमण लागि सबै अवस्थाको विस्तृत वर्णन गर्दछ। यो सबै काम एक रिमोट र भूल प्राचीन मा रहेको हामी सबै को पुर्खाहरूको, यात्रा र अन्य दुनिया र समानान्तर universes उत्प्रेरित गर्न सक्ने मान्छे साबित गर्न Vladimirom Alekseevichem द्वारा लेखिएको थियो।
हामी यो शहर, वास्तवमा छ छैन जो कि Zurbagan बारेमा भन्न सक्छौं?
कथा "Alenka र भाइ इवान": प्लट को विवरण
Lermontov कामहरू प्रेम को विषयवस्तु। प्रेम बारे Lermontov गरेको पद
Aksenov Vasily: जीवनी र लेखक को सबै भन्दा राम्रो पुस्तकहरू
सैन्य कर्तव्य के हो?
कसरी जाडो ओपेरा कार्टून अक्षर राख्न सिक्न
पेन्जामा होटल: यात्रीको लागि सानो सहयोग
सेन्ट पीटर्सबर्ग मा THEODORE गरेको गिरजाघर
बिरुवा मलम: निर्देश पुस्तिका, समीक्षा
युद्धभूमिमा 4: प्रणाली आवश्यकताहरू
एक "स्मार्ट" शक्ति आउटलेट के हो? "स्मार्ट" एसएमएस-सकेट
Cankers, यो चार अक्षर छन् के हो?